Niakatra indray … : 4.000 Ar ny lasantsy, 3.350 Ar ny gazoala | NewsMada
Niakatra indray … : 4.000 Ar ny lasantsy, 3.350 Ar ny gazoala
Par Taratra sur 10/04/2018
Rehefa nahitana sondro-bidy 80 Ar ny 1 avrily teo ny solika, ny ampitson’iny ihany, naverina indray amin’ny vidiny farany, izany hoe, ny vidiny tamin’ny volana marsa 2018. Ny gazoala, be mpampiasa indrindra, naverina ho 3.280 Ar, rehefa nampiakarina 3.370 Ar ; lasantsy, naverina ho 3.930 Ar, raha natao ho 4.010 Ar ; ny solika fandrehitra, naverina ho 2.400 Ar, raha natao ho 2.440 Ar.
Omaly 9 avrily ihany anefa, nahitana sondro-bidy vaovao indray ny solika, nampiakarina 70 fa tsy natao 80 Ar intsony. Vidiny vaovao : 3.350 Ar ny gazoala, 4.000 Ar ny lasantsy, ary niakatra 30 Ar ny solika fandrehitra ka lasa 2.430 Ar. Betsaka ny singa entina hikajiana izany, anisan’izany ny sandam-bola ariary manoloana ny dolara. Manodidina ny 3.200 Ar izao ny dolara iray, ary ny vidin-tsolika eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, eo amin’ny 70 dolara ny “baril”. Inona ary ny antony namerenana ny vidiny ary andro vitsy monja aty aoriana indray, nampiakarina izany ?
Nitondra fanazavana momba izany ny minisitry ny Angovo, ny rano sy ny solika, Rasoloelison Lantoniaina, nilazany fa misy fifanarahana vaovao eo amin’ny governemanta sy ireo kaompania mpaninjara solika ireo. “Raha amin’io 70 dolara ny “baril” io, tsy tokony ho latsaky ny 4.000 Ar ny gazoala ary 4.650 Ar ny lasantsy. Saingy tsy maintsy jerena ny fomba fanalefahana izany ary alefa tsikelikely”, hoy ny minisitra. Noho io vidin-tsolika io ihany, nampitombona ny fanampiana nomena ny Jirama, 300 miliara Ar, raha 200 miliara Ar izany teo aloha.
Takin’ny mpamatsy vola ny fampiharana ny tena vidiny any amin’ny mpanjifa, mampihena miandalana ny famenoana avy amin’ny fanjakana, mampihena ny vola mivoaka avy amin’ny fanjakana. Nisy, araka izany, ny marimaritra iraisana eo amin’ny fanjakana sy ireo mpaninjara solika nahatonga izao vidiny vaovao izao. Mizaka ny fiantraik’izany ny mpitatitra sy ny mpandeha, miantefa amin’ny vidim-piainana andavanandro.